Abasetyhini Bafa Ekufeni Ukubulala Abantwana Babo
Uhlanga luhlala lugqitywa ngamacala obugebengu afana no- Andrea Yates , unina wabantwana abahlanu ababethelela umama emanzini kwindawo yokuhlambela, ngoko ke bathiwa ngokuzenzele amapolisa ukuba abike, kodwa oomama ababulala abantwana babo bubugebengu obuqhelekileyo kunokuba sinokucinga.
Ngokombutho we-American Anthropological Association, amabhinqa angaphezu kwama-200 abulala abantwana bawo eMelika ngamnye ngonyaka. Abantwana abathathu ukuya kubahlanu ngosuku babulawa ngabazali babo.
Ukuzibulala ngenye yezona zinto ezibangela ukufa kwabafundi abangaphantsi kweminyaka emine, "Kodwa siyaqhubeka siqhubeka nembono engenangqiqo ukuba oku kuziphatha okungaqhelekanga," kusho uJill Korbin, ingcali yokuxhaphazwa kwabantwana, oye wafunda ngokude ngoomama babulala babo abantwana.
"Sifanele siphumelele kwimbono yokuba ngumama jikelele njengendalo kwaye sibone njengempendulo yentlalo," uNancy Scheper-Hughes, u-anthropologist wezokwelapha uthi. "Kukhona ukuphika ngokubambisana nangona oomama bephuma baze bathi, 'Andifanelekile ukuba ndiyathembeke nabantwana bam.'"
Imiba emithathu ebalulekileyo edlalwa indima xa oomama babulala abantwana babo - i-psychosis postpartum, i-psychotic breakdowns ezenzelwe izinto ezifana nomona kunye nokushiya nobudlova basekhaya.
Ukuxinezeleka kwePostpartum kunye nePostpartum Psychosis
Uxinzelelo lwePostpartum yingxaki eqhelekileyo engenzeka kwiiveki ezine zokuziswa komntwana. Iyakuchaphazela boomama noobawo, nangona ipesenti zincinci kuphela ziba namava.
Izimpawu eziqhelekileyo ziquka ukuxinezeleka, iimvakalelo, ukungakhathazeki, ukwesaba, ukuzithemba, ukungakwazi ukuxhamla nosana olutsha, ukuziva ungento. Ukuba ishiywe ingaphatywa, ingakhokelela kwisifo sengqondo se-postpartum.
I-postpartum psychosis inzima kakhulu kwaye inobungozi. Iimpawu zibandakanya ukulahla okukhulu, ukuziphatha okugqithisileyo, kunye neengcamango zokuhlola apho amazwi ayalela umama ukuba azibulale okanye abulale okanye / okanye abulale umntwana / abantwana bakhe.
Ngokuqhelekileyo umama ukholelwa ukuba izenzo ezinjalo ziyakusindisa umntwana ebomini obunzima.
Kwezinye iimeko, abantwana babulawa ngenxa yomama onokuphazamiseka kwengqondo okwenziwe ngumvakalelo omkhulu wokushiya kunye nomona kwiimeko apho uyise wabantwana eshiye ekhaya. Kwezinye iimeko, imfuneko yokuziphindisela iyanesizathu.
Ukujongwa kwimiba yabasetyhini abasemgceni wokufa, kunye nolwaphulo-mthetho olubabeka khona, lubonisa ukuba abafazi ababulala abantwana babo ngokwenene abanqabile njengokuba sifuna ukukholelwa.
UPatricia Blackmon wayeneminyaka engama-29 ubudala xa wabulala intombi yakhe eneminyaka emibini ubudala eyamkelwe eDothan, AL ngoMeyi 1999.
U-Kenisha Berry eneminyaka engama-20 ubudala, wamgubungela unyana wakhe oneminyaka engama-4 ubudala kunye nombhobho ophethe umbhobho obangela ukufa kwakhe.
UDebra uJean Milke wayeneminyaka engama-25 xa ebulala unyana wakhe oneminyaka engama-4 e-Arizona ngo-1989.
UDora Luz Durenrostro wabulala iintombi zakhe ezimbini, uneminyaka engama-4 no-9, kunye nendodana yakhe, eneminyaka eyi-8 xa wayeneminyaka engama-34 ubudala eSan Jacinto, eCalifornia ngo-1994.
UCaro Socorro wayeneminyaka engama-42 ubudala xa wabulala oonyana bakhe abathathu, abaneminyaka emi-5, 8 no-11, eSanta Rosa Valley, eCalifornia ngo-1999.
USusan Eubanks wabulala oonyana bakhe abane, abaneminyaka engama-4, 6, 7 no-14, eSan Marcos, eCalifornia, ngo-1996 xa wayeneminyaka engama-33.
UCaroline Young wayeneminyaka engama-49 e-Haywood, eCalifornia xa ebulala umzukulu wakhe oneminyaka emine ubudala kunye nomzukulu oneminyaka engama-6 ubudala.
URobin Lee Row wayeneminyaka engama-35 ubudala xa ebulala umyeni wakhe, unyana wakhe oneminyaka eyi-10 kunye nentombi yakhe eneminyaka engu-8 ubudala eBoise, i-Idaho ngo-1992.
UMichelle Sue Tharp wayeneminyaka engama-29 ubudala eBurgettstown, ePennsylvania xa ebulala indodakazi yakhe eneminyaka eli-7 ubudala.
UFrances Elaine uNewton wayeneminyaka engama-21 xa ebulala indoda yakhe, unyana oneminyaka eli-7 kunye nentombi eneminyaka emi-2 ubudala e-Houston, eTexas. Uhlaziyo: UFrances Elaine uNewton wabulawa ngoSeptemba 14, 2005.
UDarlie Lynn Routier wayeneminyaka engama-26 eRowlett, eTexas xa wayetyala ngokubulala indodana yakhe eneminyaka emihlanu ubudala.
UTeresa Michelle Lewis wabulala indoda yakhe eneminyaka engama-51 ubudala kunye nomntwana oneminyaka engama-26 ubudala eKeeling, uVirina xa wayeneminyaka engama-33 ubudala.
UKorbin wathi kukho izikhokelo ezibonakalayo kubantwana abajikeleze abazali abaphelisa ukubulala abantwana babo.
"Ngaphambi kokubulawa kwabantu, abantu abaninzi bazi ukuba la madoda nabesifazana banenkinga yokukhulisa abazali. Uluntu kufuneka lufunde kangcono ngokuqonda indlela yokungenelela ngayo nendlela yokuxhasa ukukhuselwa kakubi kwabantwana," watsho.
Ukubulawa kweShanda Sharer
Inani leNombolo yeNombolo
IiSayithi zeNzululwazi ze-Interactive zeKlasi
Izakhiwo zeePostile kwiUnited States
Indlela yokuLawula isangqa kwiNkcubeko yamaPagane
I-New Mexico Tech Admissions
Ukuxhatshazwa kwe-Cyberstalking ne-intanethi - Emva koko kunye neNje
Ngaba Iintaba Ziyakwazi Ukuguqula Ubusuku Obushushu?
Okwangoku kwimbali (isenzi sexesha)
Kutheni Ubonakalisa Imifanekiso?
Amagama ama-10 acids Acids
Iingcebiso ezi-4 zokuguqulela ngokukhawuleza kwiSikole sikaRhulumente ukuya kwiiHomeschool
Izizathu Eziphambili Zokuba Abafundi behluleka Ukusebenza Kwemvelo
Kutheni sisadingeka Usuku lomsebenzi, kwaye anditsho ukuba i-Barbecues
Usuku lokugqibela luka-Obama njengoMongameli
Izigqeba eziPhakamileyo kunye neziNdlobongela eziMthethweni
Yintoni i-Mercury ebomvu?
Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo malunga neSikole sezoNyango